Amazon Echo VS Google Home: Midkee ayaan iibsadaa? | Androidsis
Haddii aad ka fekereyso inaad soo iibsato mid ka mid ah aaladahaan cusub ee casriga noqonaya bilihii la soo dhaafay, kuwa ku hadla caqli badan oo leh kaaliyeyaal la dhisay, waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso fiidiyowgaan-fiidiyowga ah maxaa yeelay dhexdeeda waxaan ka sameyneynaa isbarbardhig adag oo u dhexeeya laba ee ugu caansan suuqa. Waxaan ka hadlaynaa Guriga Google ee Amazon Echo VS.
Iyada oo tan isbarbar dhigga waqtiga dhabta ah, waxa kaliya ee aan ka dooneyno halkan Androidsis waa inaan ku tusno wax kasta oo wanaagsan iyo wax kasta oo xun oo mid kasta oo ka mid ah aaladaha casriga ah uu na siiyo si aad uhesho erayga ugu dambeeya midka aad xiiseyneyso inaad ku iibsato hadba baahidaada gaarka ah iyo korontada aad bixinaysid. Tani marka laga reebo, sida aan had iyo jeer sameeyo, qoyan ayaa ku siinaya aniga ra'yigayga ugu daacadsan ee ku saabsan qayb kasta oo ka mid ah qaybaha aan ugu mahadnaqnay Amazon Echo VS Google Home, ama waxa ku yimaada isla wax, Alexa VS Google Assistant.
1 Naqshadeynta iyo tayada qalabka
2 Tayada codka iyo awooda
3 Caawiye ficil: Wadahadal, hadal iyo aqoonsi luqadeed
4 Otomaatiga guriga: Xakamaynta qalabka ku xiran, nalka iyo fiilooyinka
5 Xirfadaha: Ciyaaraha isku dhafan iyo codsiyada
6 Fikirkeyga shaqsiyeed
Naqshadeynta iyo tayada qalabka
Xaga naqshadeynta ayaynu wajahnay laba shey oo leh qalab dhisme oo tayo sare lehinkastoo Anigu shakhsi ahaan waan u arkaa naqshadda 'Amazon Echo' mid aad u xiiso badan, Echo Dot iyo Echo Spot, kiiskan Echo wuxuu u muuqdaa mid aad uga qurux badan dhammaystirkiisa marka loo eego Guriga Google.
Marka laga hadlayo nashqadeyntiisa, waana tan ra'yigeyga shaqsiyeed, waxaan arkaa inay wax badan ka qabsaneyso jawiyada kala duwan ee guryaheena. saddex midab oo kala duwan oo aan ku heli karno moodooyinka 'Amazon Echo' saddexdeeda nooc ama moodelkiisa.
Tayada codka iyo awooda
Marka laga hadlayo tayada codka, halkan waa inaan si aad ah ugu cadeeyo fekerkeyga shaqsi ahaaneed isla markaana aan la barbardhigo isticmaaleyaasha kale ee awooday inay tijaabiyaan Amazon Echo iyo Google Home, waana marka la eego awoodda, hufnaanta dhawaaqa iyo baaska xoogga leh Amazon Echo wuxuu siinayaa Google Home dib u eegis wanaagsan.
Waxaas oo dhan iyada oo la tixgelinayo in qaabka Echo ee Amazon lagu heli karo oo keliya 99 euro halka Guriga Google uu ku soo baxayo 149 euro, taas oo noqonaysa 50 euro ayaa ka badan Guriga Google marka loo eego Amazon Echo.
Haddii isticmaalka ugu weyn ee aad siin doontid afhayeenka caqliga leh ee aad raadineyso uu yahay dhageysiga muusikada, markaa waxaan kugula talinayaa inaad go'aan ka gaarto Echo-ka 'Amazon Echo' tan iyo tayada codka, maadaama ay si xun u dhahaan, waxay ku siineysaa timaha baalasha Google Home.
Caawiye ficil: Wadahadal, hadal iyo aqoonsi luqadeed
Sida aqoonsiga codka, makarafoonka firfircoon ee labada terminaal waa awood ku filan si ay u hawlgasho ka dib dhageysiga amarka meel kasta oo ka mid ah guri ama dabaq yar, adoo kor u qaadaya codka wax yar. Markaan tixraaco guri fidsan ama yar, waxaan ula jeedaa qiyaastii 70 ama 80 mitir murabac.
Waxyaabaha kale waa xagga luqadda, labadaba codadka kaqeybgalayaasha iyo awooda lagu fahmi karo waxa aan dhahno oo aan dhaafsiisnayn u hogaansanaanta amarrada ama ereyada.
Waa dareenkan mar kale Waa inaan doortaa Amazon Echo iyo kaaliyeheeda Alexa, caawiye awood u leh inuu falanqeeyo weedha aad dhahdo si aad uhesho amarka u dhigma adigoon ku dheganayn ereyada gaarka ah.
In kastoo dareenka aqoonsiga codka iyo falanqaynta weedhaha aan ku dhahno kaaliyeyaashan, Alexa ayaa u dhaqma si aad u wanaagsan, Waxa shaki la'aan garaacaya Guriga Google waxay ku jirtaa is dhexgalka aaladaha kale sida Chromecast ama codsiyada aan ku rakibnay barnaamijkeenna Android.
In macnaha this Google Home wuxuu leeyahay is dhexgal buuxa YouTube, Google Play Music, Netflix ama xitaa Spotify qaybtiisa bilaashka ah adigoon qandaraas ka qaadin adeegga caymiska si aad u dhagaysan kartid Liistada aad u jeceshahay adigoo adeegsanaya Google Home.
Otomaatiga guriga: Xakamaynta qalabka ku xiran, nalka iyo fiilooyinka
Halkan, sababtoo ah aqoonsiga kor ku xusan ee luqadda taas oo Echo ay si cad uga sarreyso mahadnaqa kaaliyeheeda Alexa, waa inaan go'aansadaa oo aan doortaa mar kale Afayeenka caqliga badan ee Amazon tan iyo markii aad ayey ugafiican tahay la falgalkeena aaladaha casriga ah ee ku xiran.
Tusaale ahaan, haddii aan haysto qalab la yiraahdo "Qolka Qolka Cunnada" inta aan haysto Guriga Google waa inaan ku dhaganaadaa oo dhaha "Daarta ama dami qolka cunnada" ama "Daar ama ka billow qolka cuntada", Echo with kaaliyeheeda Alexa wuxuu awood u leeyahay inuu fahmo jumladaha qalafsan sida "Ma sameyn kartaa wax ii roon adigoo damiya nalka qolka cuntada?" o Ma damin kartaa nalka qolka cuntada?
Xirfadaha: Ciyaaraha isku dhafan iyo codsiyada
Qeybtaan, inkasta oo labada terminaal ay si isku mid ah u leeyihiin xirfado isku mid ah ama codsiyo iyo adeegyo isku xiran, Guriga Google wuxuu leeyahay hal shay oo aniga ahaan ay aad uga fiican tahay Amazon Echo, waana taas halka In Amazon Echo waa inaad dhaqaajisaa Xirfadaha sida dhabta ah kuu xiiseeya, Hoyga Google uma baahnid inaad ku dhaqaaqdo nooc kasta oo ficil ah inaad ku raaxaysato dhammaan Xirfadaha, codsiyada iyo ciyaaraha ay na siiso.
Dhinaca kale fulinta Xirfadaha, gaar ahaan codsiyada ama ciyaaraha aadka u adag, Amazon Echo oo leh Alexa ayaa mar kale ka sarreeya Google Home oo leh kaaliyaha Google, caawiye kaas oo dareenkan gaarka ah wali aad iyo aad u cagaaran.
Ka dib markaad labada istcimaal isticmaasho qiyaastii dhowr toddobaad, qiime ahaan lacagta, tayada codka, naqshadeynta iyo agabka ama kaaliyaha codka laftiisa, Anigu shakhsi ahaan waxaan door bidayaa Amazon Echo iyo Alexa maadaama ay wax badan ka shaqeeyeenAad ayey u xun tahay kuma jiraan isdhexgalka ay bixiso Google Home si loo xakameeyo Chromecast, Netflix iyo codsiyada kale ee aan ku xakameyn karno Google Home.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Amazon Echo VS Google Home. Haddii aad horay u iibsaneyso mid ka mid ah aaladahaan, eeg tan